Gufgaf|Online तबला नै मेरो सुख र दुखको साथी— अच्युत राम भण्डारी
तबला नै मेरो सुख र दुखको साथी— अच्युत राम भण्डारी
गफगाफ - नेपालका चर्चित तवला बादकहरु मध्यका एक हुन् अच्युत राम भण्डारी । वि.स २०१६ सालमा जन्मिएका भण्डारी ११ वर्षको उमेर बाट नै संगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । उनले वि.स २०२७ सालमा सांस्कृतिक संस्थान, राष्ट्रिय नाँच घरद्धारा आयोजित बाल कलाकार तालिमबाट नै आफ्नो सांगीतिक यात्रा शुरु गरेका थिए । काठमाण्डौ महानगर पालिका स्थित गौरीघाटमा वसोवास गर्दै आएका भण्डारी विभिन्न पदक तथा सम्मानबाट सम्मानित भएका छन् ।
उनले तवला सँग सम्वन्धित ११ वटा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरेका छन् भने तवलाका विभिन्न कोर्ष समावेश गराएर १९ वटा सिडी प्रकाशन गरेका छन् । यस्तै तबला गुरु, तबला गुरु जापानिज, हार्मोनियम वादन, मादल, सन्मार्ग दर्शन, इन्ट्रोडक्सन अफ म्युजिकल इन्स्टुमेन्ट, साम्भ शम्भु लगायतका ७ वटा कृतिहरु प्रकाशनको तयारीमा छन् । तबलाका विभिन्न कोर्ष सिकाउनकै लागि विश्वका विभिन्न देशहरुमा समेत पुगेका भण्डारी हाल पनि आर्थिक विपन्न छात्र, छात्राहरुलाई निशुल्क प्रध्यापन गराउदै आएका छन् । प्रस्तुत छ उनै तवला वादक भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी ।
स्वागत छ तपाइलाई ?
पछिल्लो कसरी चलचिरहेको छ जिवन ?
म एउटा संगीत सादक हुँ । संगीतमा खेलेर नै अहिले सम्म जीवन चलाइरहेको छु । अझै भनांै संगीतमा नै रमाइरहेको छु ।
तवला बजाउन कहिले बाट शुरु गर्नुभयो ?
म ९ वर्षको हँुदा नै मैले यसको सुरुवात गरेको हुँ । त्यो समय भजन कृतनमा बजाएको देख्दा मलाई पनि बजाउन मन लाग्यो, त्यस पछि चै सिक्न थालेको हुँ ।
शुरु गर्दा नै तवला बादक बन्छु भनेर सोच्नु भएको थियो ?
शुरु गर्दा त्यो सोच्न सक्ने भइसकेको थिइन । त्यो समयमा त रहरै रहरमा शुरु गरेको हु । तर घरमा पनि भजन कृतनको वातावरण भइरहन्थ्यो, त्यसले अझ प्रोफेसनल बन्न सहयोग गर्यो । म १५ वर्षको भएपछि चै यसै क्षेत्रमा मेरो जीवन छ भन्ने सोच पलाउन थाल्यो । नभन्दै म यसै क्षत्रमा अहिलेसम्म निरन्तर लागिरहेको छु ।
तवला बादक भएकै कारण विभिन्न देश विदेशका अनुभव पनि बटुल्नु भएको छ ।
तवलालाई मैले सबै भन्दा नजिकको मित्र ठान्ने गरेको छु । म हाँस्दा, खेल्दा र रमाउँदाको मेरो साथी नै तवला हो । मैले धेरैलाई तवला बजाउन सिकाएको छु । त्यसमा केहि नेपाली पनि छन् । धेरै विदेशीहरुलाई पनि सिकाएको छु । उनीहरु जब तवला सिकेर आफ्नो देश फर्किन्छन्, उता गएर उनीहरुले प्रस्तुति देखाउँदा रहेछन् । सोहि शिलशिलामा मलाई पनि उनीहरुको प्रस्तुति हेर्नकै लागि बोलाउँछन् । अनि उतै गएर सिकाउनका लागी पनि विभिन्न देशहरुमा जाने गरेको छु ।
अहिले सम्म कति जतिलाई तवला बजाउन सिकाउनु भयो ?
मैले धेरै नेपालीहरुलाई पनि तवला बजाउन सिकाएको छु भने धेरै विदेशीहरु पनि हुनुहुन्छ । गायक शिव परियार, गायिका माण्डवी त्रिपाठीलाई पनि मैले तवला सिकाएँ । न्हुच्छे दर्शन भन्ने एक जना भाई छन् । उनी हाल संगीत विद्यालय नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । किरन कडेल जसले म्युजिक स्टुडियो नै सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनलाई मैले नै सिकाएको हुँ । विदेशीहरुमा बेल्जियम, जापान, चिन लगायतका विभिन्न नागरीकहरुलाई मैल तवला बजाउन सिकाउने अवसर प्राप्त गरेको छु ।
तपाई तवला सिक्दा र अहिले तपाईले तवला सिकाइरहदा के कस्तो परिवर्तन महशुस गर्नु भएको छ ?
यसमा त धेरै परिवर्तहरु आए । हामीले तवला सिक्दा यति अत्याधुनिक तवला नै पाहिदैन थियो । अहिले पैसा भए जति पनि महंगो र राम्रो तवला पाउन सकिन्छ । हामीले तवला सिक्दाको समयमा सोसियल मिडिया अत्यन्तै कम थिए । अवसर पाउन धेरै गाह्रो हन्थ्यो । अहिले अवसर पाउन पहिला जस्तो गारो हुँदैन । क्षमता भए अवसर जति पनि पाइन्छ ।
अहिलेको परिवेशमा तवला बजाएर जीवन निर्वाह गर्न कत्तिको सहज छ ?
आफूसँग क्षमता छ भने अहिले अवसर पाउन धेरै सजिलो छ । कुनै पनि कार्य राम्रो सँग निर्वाह गर्न पहिला राम्रो अभ्यासको आवश्यकता हुन्छ । संगीत त्यस्तो चीज हो जुन जति धेरै प्राक्टिस गरिन्छ, त्यति नै निखारिदै जान्छ । त्यसैले आफु सँग राम्रो क्षमता छ भने हालको अवस्थामा तवला बजाएरै मज्जाले जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ ।
अन्तिममा तपाईलाई हेर्ने सुन्ने दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ ?
हामी कलाकार सधैं तपाईहरुकै मायाको भोका हुन्छांै । जसरी नेपाली शास्त्रीय संगीतलाई माया दिनुभएको छ, त्यो अझ बढ्दै जाओस् । सधै नेपाली कलाकारलाई माया गर्नुहोला ।